शनिबार, १८ असार
म चोर होइन १४ घण्टा
स्वागतमा उभिरहेका कमरेडहरू १४ घण्टा
जीतबहादुरको रत्यौली सपना माओवादी सेनाका सेक्रेटरी लेकविक्रम शाही (मुस्कान)लाई २०५६ सालमा सेनाले मारेका थिए । त्यही ठाउँँमा हामी पुगेका थियौं । माओवादीले त्यहाँ पक्की संरचनाको सहिद गेट बनाएका रहेछन् । त्यो गेटको माथि सेतो भुइँमा रातो अक्षरले लेखिएको थियो– मुस्कान सहिद गेट । १३ घण्टा
घर ठूलो कि परिवार ? जति नै दाबी गरोस्, मानिस जीवनभर एक्लै रमाउन सक्दैन । एक्लै त दुःखी हुन पनि सक्दैन । हो, केही समय एक्लै घुम्न सक्छ, एक्लै आफ्ना रहर पूरा गर्न सक्छ । पैसा भए केही दिन होटेलमा बस्न सक्ला, पैसा नभए पाटीमा वा आश्रममा बस्न सक्ला । तर, जब घर हुन्छ, उसले परिवार खोज्छ, खोज्छ । १३ घण्टा
मनु हुनुको अर्थ मनु ब्राजाकी अत्यन्तै अत्यन्तै आदरणीय नाम । नेपाली साहित्यको एउटा सम्मानित नाम । कथा र गजल क्षेत्रमा मनुबिनाको परिभाषा अपूर्ण हुन्छ । १३ घण्टा
अर्थहीन यात्रा १४ घण्टा
आत्महत्याको तेस्रो प्रयास पनि असफल भएपछि... धेरै भयो, नहाँसेको । नरोएको । नगाएको । ननाचेको । कुनै बेला खुब हाँसियो । रोइयो । गाइयो । नाचियो । अचेल कहिलेकाहीँ बोल्छु । कहिलेकाहीँ हिँड्छु । धेरैजसो सुत्छु । सोच्दिनँ, सम्झन्छु । १२ घण्टा
वरिपरि मलाई थाहा छ, मेरो अगाडि भएका सम्पादक महोदयलाई कस्तो कथा मन पर्छ ? यौन कथा । हुन त कुन सम्पादकलाई मन नपर्ला र, युवतीले लेखेको यौन कथा ! १२ घण्टा
त्यो बेग्लै कुरा हो लेखनले बाँचिन्छ भन्ने कुरा मेरो हकमा लागू भएको छैन । अब त हुनुपर्ने नि ! तर, भएको छैन । अब बाँकी रहेको जीवन बाँच्ने हो । जति मन लाग्यो, त्यति लेख्ने हो । किन नलेखेको भनेर पुलिसले समाउन आउने होइन । मन लागे लेख्ने हो, मन नलागे नलेख्ने । म लेखनमै सन्तुष्ट छु । यो बेग्लै कुरा हो । १२ घण्टा
थाउजेन्ड भाटको थार्ई मसाज जो कोहीलाई पनि लोभ्याउने नाइट लाइफ । बैंककसहितका ठूला सहर सेक्स टुरिजमको हब मानिन्छन् । रात रंगिएकै छ, लुट्ने र लुटाउने धन्दा चलिरहेकै छ । १३ घण्टा
सरकारी कार्यालय जान नपरे हुन्थ्यो नि ! तपाईंलाई के लाग्छ कुन्नी ? मलाई चाहिँ सरकारी कार्यालयमा जान नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । लम्बेतान प्रक्रियाको जालोमा पर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । लागेर के गर्नु ? पेसा र काम विषेशले सरकारी कार्यालय धाइरहनुपर्छ । ठोकिरहनुपर्छ सरकारी कर्मचारीसँग । ९ घण्टा
एक मिनेट बोलेको तीन रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म ! ‘हामीले रेडियोमा नाटक गर्दा एक मिनेट बोलेको ३ रुपैयाँ पाउँथ्यौं । धेरैमा २१ रुपैयाँसम्म दिन्थे । अहिले दुई मिनेट बोल्दा ५० हजार पाइँदो रहेछ’ १३ घण्टा